Iwu Forlọ na FormSpring | Martech Zone
Thursday, August 2, 2007 Tọzdee, Septemba 19, 2013
Akwụkwọ akụkọ taa sitere n'aka enyi na Ọbịa Blogger, Ade Olonoh:
Ọ bụrụ n'ịrụ ọrụ ọ bụla n'ịntanetị, eleghị anya ị legharịrị anya maka ngwa ọrụ ga - enyere gị aka iwulite ụdị ịntanetị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na - ede blọgụ, enwere ike ọ bụ maka na ị na - achọ ihe dị elu karịa ka ị ga - esi n ’ụdị nzaghachi a na - ahụkarị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa, ikekwe ị chọpụtala na ọ bụ nsogbu iji setịpụ ụdị maka ịnakọta ndenye ndenye, ma ọ bụ ị gbalịsiri ike ịnweta ụdị uru site na narị otu narị ma ọ bụ puku nke ozi ịntanetị na igbe mbata gị dị ka nsonaazụ nke mgbasa ozi n'ịntanetị na-aga nke ọma. Kweta ya: ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara HTML, ị kpọrọ asị ọrụ na-agwụ ike nke ụdị ụlọ.
Achọrọ m iwebata gị Sdị FormSpring, a nnukwu ngwá ọrụ na-ahapụ ndị ọrụ nke ọ bụla nkà larịị mfe ewu online iche, na-enyere gị aka mma jikwaa nnyefe ị weghara si ahịa. Ebu ụzọ bido ya na mbido 2006, mana ọ bụ nke ewepụtara 2.0 n’izu a nke gụnyere ụyọkọ atụmatụ dị mma nke na-eme ka ọ baa uru.
Mma nke FormSpring bụ na ị nwere ike ịtọlite ​​ụdị kọntaktị n'ịntanetị, nyocha, ma ọ bụ ndebanye aha na nkeji ole na ole na-ejighị HTML ma ọ bụ koodu ederede. Obi ga-eru gị ala ịmata na ị nwere ike ime ya n'onwe gị na-enweghị mgbe ị ga-akpọ mmadụ site na IT.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke ụdị ihe nrụpụta ụdị - ị na-ewu mpempe akwụkwọ gị site na ịdọrọ na idobe mpaghara, ma nwee ike ịhụchalụ ụdị ụdị gị ga-adị n'oge:
Mgbe ị dị njikere iji mpempe akwụkwọ gị, ị nwere ike idetuo na mado njikọ iji zigara ndị ọrụ gị, ma ọ bụ jidere otu akara HTML nke ị nwere ike itinye na blọọgụ gị ma ọ bụ weebụsaịtị. Akụkụ dị ukwuu gbasara nke a bụ na ị nwere ike iwekọta ụdị gị kpamkpam n'ime atụmatụ gị dị ugbu a, na-echekwa akara gị.
Can nwere ike ịlele nnyefe na-agagharị site na ọkwa email ma ọ bụ ndepụta RSS. Ma ozugbo ị dị njikere ịhazi nsonaazụ ahụ, ịnwere ike ibudata mpempe akwụkwọ Excel nwere ntinye, ma ọ bụ bubata data ahụ na nchekwa data ma ọ bụ usoro CRM.
Ihe kachasị mma bụ na ị nwere ike ịmepụta akaụntụ efu na-enye ọtụtụ ọrụ. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ụfọdụ iji ike, atụmatụ akwụ ụgwọ na-amalite na $ 5 / ọnwa na-enweghị nkwekọrịta ma ọ bụ ụgwọ ntọala.
Gbalịa ihe ngosi zuru oke, gụkwuo banyere ihe niile atụmatụ, ma ọ bụ debanye aha na akaụntụ efu ahụ.
Todd Harrison - LA Headshot Foto
Aug 2, 2007 na 9:52 PM
Enwere m ụfọdụ nsogbu n'oge gara aga na ụdị na ịnweta ozi niile gafere ọtụtụ narị na narị otu narị ozi ịntanetị. nke a dị ka nnukwu ngwá ọrụ maka azụmahịa m. 5 dollar kwa ọnwa abụghị ihe ọ bụla!
Aug 3, 2007 na 5:47 PM
Mgbe m gụrụ aha ahụ, echere m na ọ bụ echiche na saịtị ga-enyere mmadụ aka ịmepụta ụdị iji rụọ ọrụ na saịtị ha. Nke ahụ mere ka m nwee obi ụtọ, dịka enwere ọtụtụ ndị m ga-eziga njikọ ahụ, maka ọdịmma ha.
Maka ngwa azụmaahịa, ọ bụrụ na m ga-eji ọrụ mepụta ụdị, m ga-achọ ka ọ mepụta ụdị ahụ, nzuzo ahụ, wee nye m ntuziaka ka esi eme ka ọ rụọ ọrụ na saịtị m, na-eji sava m.
Na azụmaahịa, ozugbo ozi ọ bụla na-anọdụ na sava ndị ọzọ na-abụghị nke gị, ọkachasị maka ụdị - na ụdị ịkpọtụrụ?!?! ooo! - ọ bụghị ohere m ga-ahapụ ya ka ọ nọrọ na sava ụlọ ọrụ ọzọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'afọ-n'abalị (chee banyere ụlọ ọrụ VoIP ahụ na-adịbeghị anya nke mechiri ọrụ na ndị ahịa ya niile na-enweghị ịdọ aka ná ntị), ị ga-atụfu ihe niile.
Mba, daalụ. Ego ise na otu ọnwa abụghị nke ukwuu, mana enwere m ọtụtụ nchịkọta Bochum na ọnụ ahịa media nke nchịkọta ndị ahụ bụ $ 19 kwa ọnwa. Maka $ 19 ahụ, ana m enweta aha ngalaba isii n'efu, karịa 300gigs nke ohere, ụdị, na ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ niile (ọtụtụ anaghị m emetụ aka), na aha nnabata email na-akparaghị ókè na adreesị email 2,000. Tinye 1,000 ọzọ maka ihe na-esote ihe efu.
Ingdebanye ụdị ụdị anaghị esi ike. Ndị ọchụnta ego, ọkachasị, kwesịrị ịdị na-ekwusi ike maka ikwe ka ndị ọzọ na-abụghị ndị nke ha na-achịkwa ozi ha. Ọ bụrụ na ihe nkesa FormSpring ego n'anya, ụlọ ọrụ ahụ tụfuru ihu na ndị ahịa. Gafe ego ahụ ma sị, “Onye na-enye anyị maka ụdị kọntaktị mere ya…” bụ ezigbo ihe ngọpụ.
Daalụ, mana m ga-edebanye akwụkwọ m n'ụdị ma mee ka ha bido na sava m.